Tetikasa PIAA: havaozina ny fantsona goavana ao Analakely | NewsMada
Tetikasa PIAA: havaozina ny fantsona goavana ao Analakely
Holavahana any amin’ny 4m ny arabe manoloana ny Pavilon analakely hanooana ny fantsona lehibe ao ambany ao. Hisy ny fikisahan’ireo mpivarotra vokatr’izany.
Nampahafantatra ireo mpivarotra sy mpivezivezy eo Analakely, indrindra manoloana ny Pavillon, ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa hisy ny asa goavana hotanterahina ka mety hanelingelina ny fiainan’ny mponina eny.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa PIAA ny fanavaozana ny fantsona lehibe mitondra rano maloto ao ambanin’ny arabe manoloana ny Pavillon Analakely iny. Holoarana any amin’ny efatra metatra izany arabe izany hahafahana manavao ny fantsona.
Efa antitra sy simba izany fantsona izany ary miteraka fihotsahan’ny arabe rehefa fotoan’ny fahavaratra.
Tamin’ny taon-dasa, nihotsaka ary lasa lavaka be izany arabe izany ka mitera-doza ho an’ny mpivezivezy eny Analakely.
Hiantomboka eny amin’ny tsangambaton’ny Sida hatreny amin’ny Shoprite Analakely izany fanamboarana izany ka mila miomana amin’izany ireo mpivarotra sy mpiantsena ary ireo mpivezivezy eny Analakely.
Nanamarika ny kaominina fa tsy indray loarana izany arabe izany fa handeha tsikelikely ny fanamboarana hitsinjovana ny fiveloman’ny mponina eny an-toerana.
Hivezivezy maharitra amin’io toerana io, araka izany, ireo fiara vaventy ka mila mitandrina, indrindra ireo manana ankizy mandehaleha eny.
Hiantoka ny fikarakarana ny lakandranon’Andriantany sy izay mifandray aminy ihany koa ity tetikasa PIAA ity. Haharitra roa taona ny asa fanadiovana izany lakandrano izany amin’ny alalan’ny fitaovana vaventy.